Fabienne Thibeault mara ọkwa na o nwere glaucoma: "Enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla" - TELES RELAY
Fabienne Thibeault mara ọkwa na o nwere glaucoma: "Enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla"
N'ụtụtụ Mọnde nke abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa 24, Jordan De Luxe ga-anata dịka ụdị nke ụbọchị ahụ Fabienne Thibeault, n'ime ihe ngosi ya L'Instant de luxe. Ogologo oge, onye na-abụ abụ dị afọ 67 gara ileghachi anya n’ọrụ ya, na mkpughe ya nye ọha mmadụ ekele ya Luc Plamondon ma ọ bụ ịkọsara ihe ịga nke ọma zutere ya na mwepụta nke album ya. N'elu ndị Non Stop People, Fabienne Thibeault ga-ewerekwa ohere ahụ kwuo banyere ndụ onwe onyedị ka ekpughere saịtị ahụ.
Na nghọta nile, onye na-agụ uri nke Quebec ga-ekwupụta ahụike ya, ọfụma nsogbu anya ya. Fabienne Thibeault nwere ọrịa ketara eketa nke na-emetụta anya ya. « Anaghị m ahụ ụzọ nke dị mkpụmkpụ, a na-agwọ m maka glaucoma ma buru amụma na m ga-enwe AMD [gbasara afọ ndụ macular degeneration, ihe edeturu]ọ sịrị. Onye na-eweta Jordan De Luxe chọziri ịma ma enwere ihe ize ndụ na onye ọbịa ya ga-efunahụ ya mgbe niile.
Fabienne Thibeault: "A na-emeso m, anyị anaghị echegbu onwe anyị"
Ajụjụ nke onye na-abụrụ ya n’afọ isii zara ya na nkwanye aka: "Eleghi anya, ee ... anyị ga - ahụ", tupu ịtụnye ọnụ ọchị: "Nke a bụ ikpe ikwu ya". Fabienne Thibeault gbakwụnyere ozugbo, yana ịmụmụ ọnụ ọchị na ihu ya: "Mana ọ bụghị maka ugbu a, m ka nwere afọ ole na ole n'ihu m". Cette “Ọrịa ezinụlọ”, na-agụ abụ-abụ abụ maara nke a: "Anyị na ndị nna nna anyị nso karịa ka anyị chere", ka o kwuru. Ingchọrọ ka obi sie gị ike n'ihu ndị na-ege ya ntị, ndị na-agụ egwú kpughere maka ọrụ ya dị ka Marie-Jeanne na Starmania egwu kọwara soro ọgwụgwọ mgbe niile. "Mana a na-elebara m anya, anyị echegbula. Ma ahụghị m ihe ọ bụla ”, o kwubiri, na-efegharị aka ya n'ihu ya.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.closermag.fr/people/fabienne-thibeault-annonce-etre-atteinte-d-un-glaucome-je-ne-vois-rien-1087568